www.xamarcade.com » Farmaajo oo Masar uga qeyb galaya shirka Ganacsiga Afrika
Farmaajo oo Masar uga qeyb galaya shirka Ganacsiga Afrika
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo) ayaa maanta magaalada Sharma Sheikh ee dalka Masar uga qeyb galaya shirka Ganacsiga Afrika oo lagu qabanayo Magaaladdaasi.
Wafdi uu hoggaaminayo Madaxweynaha Soomaaliya oo shalay gelinkii dambe ka ambabaxay Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho ayaa xalay gaaray Magaalada Sharma Sheikh, waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay Madaxda dalka Masar.
Farmaajo ayaa waxaa safarkaan ku wehlinaya Masuuliyiin ka tirsan Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo ay ka mid yihiin Wasiirka Arrimaha Dibadda Yuusuf Garaad Cumar, Wasiirka Qorsheynta Jamaal Xasan iyo xubno kale.
Shirkan Madaxweynaha iyo wafdigiisa ay ka qeyb galayaan ayaa waxa uu qorshahay yahay inuu socdo laba maalmood, iyaddoo lagu gorfeyn doono horumarka ganacsiga Qaaradda Afrika.
Marka laga soo tago Wafdiga uu hoggaaminayo Madaxweynaha Soomaaliya, sidoo kale waxaa shirkaas Masar ka dhacaya ka qeyb galaya qaar ka mid ah Madaxda wadamada Afrika, waxayna Madaxdaasi shirka Gacansiga Africa 2017-ka ka jeedin doonaan khudbado.